CaOCl2 (calcium oxychloride) = O2 (oxygen) + CaCl2 (calcium chloride) | Isla'egta Falcelinta Kiimikada ee dheellitiran
CaOCl2 = O2 CaCl2 | Isu dheellitirka Kiimikada
kalsiyum oxychloride = kaalshiyam chloride
kaalshiyamka oksijilor Oxygen kaloriinnada kaalshiyamka ah
(qol b )t) (kh) (rnn)
(trắng, xốp) (xoog leh) (si dhab ah u soco)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2
Waa maxay xaalada falcelinta CaOCl2 (calcium oxychloride)?
Heerkulka: heerkulka Xalka: CuO ama Fe2O3 Xaaladda Kale: light
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa O2 (oxygen) iyo CaCl2 (calcium chloride)?
Dhacdada ka dib CaOCl2 (calcium oxychloride)
Saamaynta iftiinka ama kuleylka, xalka lime chloride xal leh naxaas oksaydh ama birta oksaydh oo ah soojire, liime chloride waa la jarjaray si loo abuuro oksijiin iyo kaalshiyam
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta CaOCl2 (calcium oxychloride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee CaOCl2 (calcium oxychloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CaOCl2 (calcium oxychloride) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee O2 (calcium oxychloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh O2 (oxygen) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta CaCl2 (calcium chloride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee CaCl2 (calcium oxychloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh CaCl2 (calcium chloride) badeecad ahaan?
soo saaro O2 (oxi) , xaalada heerkulka ma aha độ , Xaaladda dareeraha CuO hoặc Fe2O3
Falcelinta soo saarta walaxda CaOCl2 (Clorua vôi) (calcium oxychloride)
Ca (OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O CaO + Cl2 → CaOCl2
2KNO3 → 2KNO2 + O2 2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2 2AgNO3 → 2Ag + 2MAYA2 + O2
Falcelinta soo saarta walaxda CaCl2 (Canxi diclorua) (kaalshiyam chloride)
2CaOCl2 → O2 + 2CaCl2 BaCl2 + Ca (OH)2 → Ba(OH)2 + CaCl2 Tuug3 + 2HCl → H2O + CO2 + CaCl2